Jigjiga Madaxweynaha DDSI Ayaa Hogaaminta Heerarkoda kala duwan Ee X.D.SH.S.I.ku Booriyay inay sii adkeeyaan Waajibaadka Shaqada ay Shacabka Uhayaan - Cakaara News
Jigjiga Madaxweynaha DDSI Ayaa Hogaaminta Heerarkoda kala duwan Ee X.D.SH.S.I.ku Booriyay inay sii adkeeyaan Waajibaadka Shaqada ay Shacabka Uhayaan
Jigjiga(CN) Khamiis Oct,09,2014.kadib markii uu si habsami leh Oo cad cadaani ku jirto uu kusoo gabagaboobay shirwaynihii 8aad ee caadiga ahaa Ee X.D.SH.S.I kaasi oo ka qabsoomay xarunta gobolka nogob Ee fiiq ayaa waxaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ka qabsoomay habeenkii xalay ahaa kulan looga wada hadlayay sidii hoos loogu dhaadhicin lahaaa go'aamadii kasoo baxay shirwaynihii 8aad ee X.D.SH.S.I. Isla markaasina lagu sii dardar galin lahaa Qorshaha shaqada sanadkan 2007da kulankani oo ay kasoo qayb galeen heerarka kala duwan ee hogaaminta sare Ee X.D.SH.S.I. Golaha dhexe ee xisbiga kawaadiirta iyo unug aas aasiyada X.D.SH.S.I.
Waxaana furitaankii ka hadlay madaxweynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ahna gudoomiye kuxigeenka X.D.SH.S.I. waxaa uuna sheegay madaxweynuhu in cadowga 1aad ee Deegaanku yahay saboolnimada sida looga bixikaraana ay tahay tilmaamaha iyo tabaha siyaasadeed Ee X.D.SH.S.I. Udajin kaasi oo guulo lagu diirsan karo laga soo hooyay sanadihii lasoo dhaafay isla markaasina loo baahan yahay in xubnaha xisbigu noqdaan Kabaha shacabka lana sii dardar galiyo shaqooyinka madaama lagu jiro sanadkii ugu danbeyay ee 5tii sano Ee qorshaha G.T.P-ga ee udajisanaa dalkan itoobiya
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha X.D.SH.S.I. ahna Afhayeenka golaha baarlamaanka DDSi Mudane Maxamed Rashiid Isaaq waxaa uuna sheegay in loo baahan yahay in lasii laba jibaaro ka dhabaynta qorshayaasha uyaala Xisbiga laguna shaqeeyo siyaasadaha iyo jihooyinka lagu tijaabiyay shaqooyinka isla markaana midho dhalay.
waxaa isna codbaahiya qaatay madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka,dhismaha iyo Warshadaha mudane C/xakiin cigaal oo sheegay in deegaanka soomaalida itoobiya uu maanta ku taagan yahay tubta toosan ee horumarka lagu gaadhayo taasna ay sababtay siyaasada cad ee uu ku shaqeeyo X.D.SH.S.I. Loona baahan yahay in xubin kastaa oo Xisbi ah uu ugu adeego bulshada si wadaniyad iyo xilkasnimo ku dheehan tahay kulankani ayaa intii uu socday waxaa ay kooxaha fanka iyo suugaanku kusoo bandhigeen suugaan ka hadlaysay waxqabadka X.D.SH.S.I. Ee dhinacyada horumarka nabadgalyada iyo Maamulka suuban Ee ka hana qaaday guud ahaanba Deegaanka soomaalida itoobiya